Hypertension – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
သွေးတိုးမှ ဆေးသောက်ရမှာလား . . .
မေး. ကျွန်မအမျိုးသားက သွေးတိုးရောဂါရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ဆေးကိုပုံမှန်မသောက်ချင်ဘူး။ သွေးတိုးမှ ဆေးသောက်ရမှာလို့ ပြောတယ်ဆရာ။ အဲဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ ဆေးသောက်တာက မှန်ပါသလား။ လဲ့ယဉ်နွယ်၊ ချောက်မြို့။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သွေးတိုးရှိမှန်း သိတဲ့လူတွေကို မေးကြည့်တော့ လူအယောက်...
လူတိုင်းသိထားသင့်သည့် သွေးတိုးရောဂါ ကာကွယ်နည်းလေးမျိုး
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. သွေးတိုးရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နည်းအပြင် သွေးတိုးရောဂါရှိပြီးသူတွေ နောက်ဆက်တွဲရောဂါမ၀င်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. သွေးတိုးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်နည်းလေးမျိုးရှိပါတယ်။ (၁) Primodial Prevention ဒါက ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်လူဦးရေအားလုံးဟာ သွေးတိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ပြောတာပါ။ မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ပြီး...
သွေးတိုးကျရန် သိထားသင့်သော တခြားအချက်များ
မေး. သွေးတိုးရောဂါရှိလို့ ဆရာဝန်နဲ့သေချာပြပြီး ဆေးလည်းသောက်ပါတယ်။ သွေးတိုးကျဖို့အတွက် တခြားဘယ်အချက်တွေက အရေးကြီးပါသလဲ။ ဦးမင်းမြင့်ဝင်း၊ ကျောက်မြောင်း။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. နောက်ထပ်အရေးကြီးတာက နေထိုင်မှုပုံစံကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ – တစ်နေ့ကို နာရီဝက်လောက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ သွေးပေါင်တက်နေချိန်မှာတော့ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ပါနဲ့။ –...
သွေးတိုးရှိမှန်းမသိလို့ သွေးကျဆေးသောက်မိရင် . . .
မေး။ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သွေးတိုးရှိမှန်း မသိတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ မူးဝေလာတဲ့အခါမှာ သွေးတိုးလို့ထင်ပြီး သွေးကျဆေးတွေ သောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါက အန္တရာယ်ရှိနိုင်သလားရှင့်။ ကိုထူး (FB) ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ အန္တရာယ်လည်း ကြီးပါတယ်။...
သွေးတိုးရောဂါရှိရင် လူသက်တမ်းစေ့နေနိုင်ဖို့ . . .
မေး ။ သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေ လူ့သက်တမ်းစေ့နေနိုင်အောင် ဘာအကြံပြုလိုပါသလဲ ဆရာ။ ကိုဝင်းမြင့်၊ တွံတေး။ ပါမောက္ခဦးကိုကို(ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ သွေးတိုးရောဂါ ရှိနေသူတွေအနေနဲ့ အငန်လျှော့စားရပါမယ်။ အဆီအအိမ့်ကို လျှော့စားရပါမယ်။ အုန်းနို့ကိုလျှော့စားရပါမယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သွေးတိုးရောဂါရဲ့ ၉၀-၉၅ ရာခိုင် နှုန်းက ဘာကြောင့် သွေးတိုးဖြစ်သလဲဆိုတာမသိကြပါဘူး။ တချို့ကတော့ မျိုးရိုးကြောင့်၊ ဥပမာ-အဖေ၊ အမေမှာ သွေးတိုးရောဂါရှိရင် သားသမီးမှာဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။ သွေးတိုး ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းလေးတွေတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့- အကြောင်းကြောင်းကြောင့်...
သွေးပေါင်ချိန်တဲ့အခါ . . .
မေး. အခုအခါမှာ သွေးပေါင်ချိန်တဲ့အခါ ဘယ်လိုစက်ကို အသုံးပြုပြီး တိုင်းတာရမှာလဲ။ ဘယ်လိုတိုင်းတာရမှာလဲ၊ ဘယ်လိုစက်ကိုသုံးပြီး ဘယ်လိုတိုင်းတာရမှာလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သွေးပေါင်ချိန်တာက သုံးမျိုးရှိတယ်။ (၁) ပြဒါးတိုင်နဲ့တိုင်းတာ၊ (၂) ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်နဲ့တိုင်းတာ၊...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. သွေးတိုးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေလုပ်နေကြတဲ့ မှားယွင်းတဲ့အပြုအမူကို သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ. သွေးတိုးရှိမှန်းသိတဲ့လူတွေကို မေးကြည့်တော့ လူ ၁၀၀ မှာ ၂၀ လောက်ပဲ ဆေးမှန်မှန်သောက်တာကို သွားတွေ့ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေက မသောက်ပါဘူး။ ဒါက ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။...
သွေးတိုးရှိရင် ငါးတန်၊ ငါးမြင်းစားလို့ရလား . . .
မေး ။ သွေးတိုးရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ငါးတန်၊ငါးမြင်းကဲ့သို့ အဆီများတဲ့ ငါးတွေ စားဖို့ သင့်ပါသလား ခင်ဗျာ။ ရဲရင့်အောင် (Fb) ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ စားလို့ရပါတယ်။ သွေးတိုးရှိပေမယ့်...
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဒီနေ့ခေတ်မှာ အထိုင်များတဲ့ လူနေမှုပုံစံရှိတာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေကလည်း တွဲပါ လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အချိုမှုန့်၊ ဆားနဲ့ အငန်ပါတဲ့ အစာတွေကိုလည်း စားသုံးမှုများလာတာကြောင့် သွေးတိုးရောဂါကလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ အောက်ပါအစာတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။...